स्थानीय तहले पर्यटनको विकास र अपनत्व लिने अवसर पाएका छन् - Karobar National Economic Daily
स्थानीय तहले पर्यटनको विकास र अपनत्व लिने अवसर पाएका छन्
query_builderJune 15, 2017 11:09 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1763
दिनेश भट्टराई महानिर्देशक पर्यटन विभाग
पछिल्लो समय दर्जनौं पाँचतारे होटल खुल्ने प्रक्रियामा छन्, जसमा बैंकहरूकै लगानी ४५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको छ । अहिले पनि नेपालका होटलहरूको क्षमता १५ लाख पर्यटक धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको पर्यटन व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
यता सयौंको संख्यामा ट्राभल, ¥याफ्टिङ, ट्रेकिङ कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् भने पर्यटनको मुख्य प्रोडक्ट हिमाल आरोहणको अनुमति दिने, हिमाल आरोहण खोल्ने र प्रवद्र्धन गर्नेसम्मको जिम्मा पर्यटन विभागलाई छ । निजी क्षेत्रको लगानी जोगाउनुपर्ने अवस्था छ भने निगमन गरेर प्रतिस्पर्धी, चुस्त र पारदर्शी पर्यटन उद्योग बनाउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि पर्यटन विभागकै छ ।
विगतमा पर्यटन विभाग विघटन गरिएको भए पनि पुनः एक दशकपछि विभाग ब्यँुताइएको थियो, जसलाई पूर्वाधार निर्माण र प्रवद्र्धनको समेत केही जिम्मेवारी दिइएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा स्थानीय तहमा पर्यटनको जिम्मेवारी विषयमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईसँग कारोबारका लागि केदार दाहालले गरेको कुराकानी :
सरकारले बजेट भाषणमार्फत पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको काम तथा केही प्रवद्र्धनका कार्यक्रम पनि स्थानीय तहलाई दिएको छ । अब पर्यटन विभागको काम के हो ?
पर्यटन विभागका दुईवटा काम छन् । एउटा काम ट्राभल, ट्रेकिङ, होटलहरूको दर्ता र नियमन गर्ने हो भने दोस्रो पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायमा बजेट पठाउने र नयाँ व्यवस्थाबमोजिम अब स्थानीय तहले गर्नेछन् । राष्ट्रिय महत्वका आयोजना तथा एक स्थानीय तहदेखि अर्को तह वा प्रदेशमा जोडिने आयोजना भने विभागले गर्नेछ ।
त्यसैले अहिले सोहीअनुसारका काम–कारबाही तथा व्यवस्था मिलाउने कार्य अगाडि बढाएका छौं । इतिहासमै पहिलो पटक स्थानीय तहले पनि पर्यटन क्षेत्रको विकास र अपनत्व लिने अवसर पाएका छन् । जसले अब देशैभर पर्यटकीय गतिविधि अगाडि बढ्ने विश्वास सरकारको छ ।
अब स्थानीय तहबाटै पूर्वाधार निर्माणसँगै दर्ता पनि हुने हो ?
अहिलेको हाम्रो नियम–कानुनको प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी हाम्रा सात वटा पर्यटन कार्यालय पनि रहेका छन् । नयाँ कार्यकारी आदेशबमोजिम नै हाम्रा निकाय र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनेछ । सबै कार्यकारी आदेश तथा ऐन–नियम संशोधनपछि दर्ताहरू स्थानीय तहमा जानेछन् । अब कानुनले गर्ने परिभाषाअनुसार स्थानीय तहमा पर्यटनका काम अगाडि बढ्नेछन् ।
हाल विभागअन्तर्गत कुन–कुन आयोजना अगाडि बढेका छन् ?
अब पूर्वाधारको काम स्थानीय तहमा गएपछि हामीले भने दीर्घकालीन महत्वका परियोजनाहरू मात्र अगाडि बढाउनेछौं । जसमा हाल अगाडि बढाइएको ‘ग्रेट हिमालय ट्रेल’ रहेको छ । त्यस्तै गरी विभिन्न पदमार्गको निर्माण पनि अगाडि बढाइएको छ ।
‘ग्रेट हिमालय ट्रेल’ को चर्चा मात्र भएको छ । ठोस काम त हुन सकेन नि ?
नेपालका लागि अत्यन्तै महत्वको परियोजना ग्रेट हिमालय ट्रेल हो । कामको कुरा गर्ने हो भने हाल केही अगाडि बढेको छ । तर, अपेक्षाअनुसार भने काम हुन सकेको छैन । अर्को महत्वपूर्ण कुराचाहिँ सबै हिमाली क्षेत्रमा उक्त ट्रेल पर्ने भएकाले र काम गर्ने समय वर्षमा जम्मा तीन महिना मात्रै हुने भएकाले ढिलाइ भएको हो । साथै, काम गर्ने जनशक्तिको पनि अभाव छ ।
‘ग्रेट हिमालय ट्रेल’ बाट नेपालले के फाइदा लिन सक्छ ?
विश्वकै लामो पदमार्ग हुने यो ग्रेट हिमालय ट्रेल नेपाल सरकारले पर्यटन वर्ष २०११ को औपचारिक घोषणा कार्यक्रममा विकास गर्ने योजना अगाडि सारेको हो । हिमालय ट्रेल विश्वका लामो र उत्कृष्ट पदमार्गमध्येको पनि उत्कृष्ट भएकाले पनि महत्व अवश्य पनि हुन्छ ।
पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म रहने उक्त पदयात्रा पूरा गर्न १ सय ५७ दिन लाग्नेछ । त्यसको जम्मा लम्बाइ भने १ हजार ७ सय किलोमिटर छ । उक्त पदमार्गलाई छुट्टै घुम्न चाहना गर्नेहरूका लागि भनेर १० भागमा विभाजन गरिएको छ । हामीले उक्त रुटलाई नेपालमा कञ्चनजंघा क्षेत्र, लाङटाङ क्षेत्र, सगरमाथा क्षेत्र, मकालु क्षेत्र, सोलखुम्बु क्षेत्र, गौरीशंकर क्षेत्र, पाँचपोखरी क्षेत्र, मनाङ–मुस्ताङ क्षेत्र तथा डोल्पा क्षेत्रलगायतमा विभाजन गरिएको छ ।
ग्रेट हिमालय ट्रेलबाट नेपाललाई पाकिस्तान, भारत, भुटान, म्यानमार तथा तिब्बतसँग जोड्ने योजना पनि हाम्रो छ । यो रुटले हिमालय शृंखलाको ४ हजार ५ सय किलोमिटर समेट्नेछ । यो रुट पाकिस्तानको नांगा पर्वत, भारतको गंगा नदी, नेपालको अन्नपूर्ण, सगरमाथा, कञ्चनजंघा हुँदै सिक्किमसम्म, त्यसपछि भुटान हुँदै भारत अरुणाञ्चल र त्यहाँबाट म्यानमार हुँदै तिब्बत पुग्छ ।
त्यसबाट पदयात्रीले ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल हेर्न पाउने हिमाल हेर्न चाहने विश्वका पदयात्रीका लागि हब नेपाल हुने भएकाले पर्यटनमा धेरै फाइदा हुनेछ । त्यसैले अहिले बाटो निर्माणमा बस्ने सेल्टर घरहरू, शौचालय बनाउने कामलाई तीव्रता दिइएको हो ।
भूकम्पबाट दर्जनौं पदमार्ग भत्किएका थिए, हालसम्म पनि पुनर्निर्माण हुन सकेनन् नि ?
२०७२ सालको वैशाख १२ गते गएको गोर्खा भूकम्पका कारण हाम्रा १९ स्थानका पदमार्गहरू बिग्रिएको र निर्माणकार्य अगाडि पनि बढाइएको थियो । यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा कार्यक्रम मिसम्याक्स हुने समस्या भएको हो ।
हामीले ठेक्का गरेर सबै काम अगाडि बढाए पनि गत वर्ष पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बजेट निकासा नगर्दा काम हुन नसकेको हो । अहिले पनि हामीले ठेक्का सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाइसकेका छौं । यसै वर्षभित्र हामी सम्पूर्ण पदमार्गको मर्मत–सम्भार सम्पन्न गर्न लागिपरेका छौं ।
हिमाल आरोहणको मुख्य सिजन पनि सकिएको छ । समग्रमा यस वर्ष कस्तो रह्यो ?
चालू सिजनमा ८ हजारभन्दा अग्ला हिमालको आरोहणमा साढे ६ सयभन्दा बढीले सफलता प्राप्त गरेका छन्, जसमा सबैभन्दा धेरै सगरमाथामा मात्रै ४ सय ४५ आरोहीले आरोहण गर्न सफल भएका छन् । यस वर्षको चालू सिजनमा अन्नपूर्ण हिमाल ६ जनाले आरोहण गर्न सफल भएका छन् ।
त्यसैगरी लोत्से हिमालको ९५ जना आरोहीले आरोहण गर्न सफल भएका छन् । त्यस्तै गरी मकालुमा ६ जना आरोहीले आरोहण गर्न सफल भएका छन् । चालू सिजनमा धौलागिरिको ५९ जनाले आरोहण गरेका छन् । यो हिसाबले हेर्दा समग्रमा राम्रो र सकारात्मक रहन गएको छ ।
यस वर्ष पनि मौसम पूर्वानुमान गलत भयो, सोचेजस्तो सफलता भएन भनेर शेर्पा गाइडहरूले गुनासो गरेका छन् नि ?
पर्वतारोहणको शिखरमा पुग्नु भनेको एकदमै प्राविधिक र जटिल प्रक्रिया हो । यसको महत्वपूर्ण कुुरा भनेको मौसम नै हो । यस वर्ष एकदमै थोरै अवधि मात्र मौसम राम्रो भएको छ, जुन पूर्वानुमान गलत भएको थिएन । हिमाल आरोहण भनेको एकदमै कठिन कार्य भएकाले सबैले सफलता गर्न नसक्दा केही गुनासो आएको हुन सक्छ ।
सगरमाथामा चोरी बढेको भन्ने चर्चा पनि आएको थियो नि ?
यो विषयमा औपचारिक रूपमा हामीलाई कुनै पनि जानकारी आएको छैन । तर, खास गरी त्यहाँ जाने भनेको जोखिमपूर्ण यात्राका लागि तयार भएर जाने हो । त्यस हिसाबले सबै आरोहणमा जाने आरोहीले आफूलाई चाहिने सामग्री बोकेरै गएका हुन्छन् ।
अर्को कुरा, हाम्रो सम्पर्क अधिकृत आधार शिविरभन्दा माथि जान नसक्ने भएकाले सोभन्दा माथिको जिम्मा सम्बन्धित एजेन्सीहरूको हुन्छ । यदि चोरीका घटना भएका हुन् भने कुन एजेन्सीमार्फत गएकाहरू चोरी कार्यमा संग्लन भए, यस विषयमा हामीलाई जानकारी आएको खण्डमा कारबाही अगाडि बढाउँछौं । यस्ता प्रकारका कार्यहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
सम्पर्क अधिकृतहरू काठमाडौंमा बसेर कसरी अनुगमन गर्छन् ?
वास्तवमा भन्दा धेरै वर्षदेखि सम्पर्क अधिकृतहरूको विषयमा चर्चा हुने गरेको छ । यो विषयमा यति चर्चा भइसक्यो कि आजभोलि त समान्यकरणजस्तो भएको छ । यो गलत हो । यस वर्ष विगतमा भन्दा केही कडाइ गरेर अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाएका थियौं ।
अब आगामी वर्षदेखि यो विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि सम्भव भएसम्म अनुगमन कार्यालय राख्ने सबै सम्पर्क अधिकृतको समेत अनुगमन गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउन खोजेका छौं । अर्को कुरा, पर्वतारोहीहरू शिखरमा पुगेको विषय विवादमा आइराख्ने गर्छ ।
अहिले भने यसको आधार भनेको फोटो र लिडरले दिएको बयानका आधारमा प्रमाणपत्र दिइँदै आएको छ । विगत लामो समयदेखि जीपीएस सिस्टम लागू गर्ने तयारीसमेत गरेको तर कार्यान्वयन नभएकाले यसलाई अगाडि बढाउन पनि सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाउन लागेका छौं ।
पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रबाट बसाइँसराइ गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको र एउटा समस्याकै रुपमा देखिएको छ । यसरी शेर्पाहरू अन्यत्र जाँदा भोलिका दिनमा हिमाल आरोहणमै समस्या हुने त होइन ?
यो एकदमै गम्भीर कुरा हो । बसाइँसराइ हामीले हेर्ने विषय होइन । विगतदेखि हालसम्म पनि अनुभवमा आधारित जनशक्ति प्रयोग भइरहेका छन् । हिमाल आरोहण भनेको अनुभवसँगै दक्षता र प्रविधिमा आधारितसमेत बनाउँदै लैजानुपर्छ । यसका लागि नाथम, पर्वतारोहण संघलगायत संस्थाहरूले तालिमसमेत दिने गरेका छन् । यसलाई अझै प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने विषयमा हामी लागिरहेका छौं ।
तपाईंहरूले क्यासिनोको विवाद कहिल्यै मिलाउन नसक्ने हुनुभयो नि ?
क्यासिनोको समस्या एकदमै जटिल छ । विभागले सधैं प्रयत्न गरेको विषयचाहिँ राजस्व उठाउने नै छ । जसले रोयल्टी बुझाउँदैनन् उनीहरूलाई कारबाही गर्न प्रतिबद्ध छौं । यस वर्ष पनि १२ करोड रुपैयाँ उठाउनका लागि ३५ दिने सूचना निकालेकोमा हाल ४ करोड रुपैयाँ दाखिला भएको छ । बाँकी भनेको केही क्यासिनो अदालतको आदेश लिएर चलाइरहेका छन् । त्यसका लागि हामीले भ्याकेट लिएर गएका छौं ।
क्यासिनो नियमावली पुनः संशोधन पनि गर्ने तयारी हो ?
केही विषयमा संशोधन गर्नका लागि धेरै पहिलेदेखि छलफलहरू भइरहेका छन् ।
पुराना क्यासिनोको वक्यौता अब नउठ्ने नै भएको हो ?
विगतमा सञ्चालन भएका र पछि सरकारलाई वक्यौता नतिरेपछि बन्द गरिएका क्यासिनोबाट नेपाल सरकारको १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ उठ्न सकेको छैन । सरकारले ल्याएको क्यासिनो नियमावली, २०७० जारी गरेपछि यसको पालना गर्न अटेर गरेपछि २०७१ को वैशाख ७ गतेबाट नेपालका सबै क्यासिनो बन्द गरिएको हो ।
सरकारले ल्याएको नियमावली पालना गरेर हाल सांग्रिलाको द मिलेनियम क्लब र सोल्टीको माजोङ र हायात रिजेन्सीको प्राइड मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । नयाँ नियमावलीमा प्रत्येक क्यासिनो सञ्चालकले चुक्ता पँुजी २५ करोड, बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड, इजाजत दस्तुर १ करोड र निवेदन दस्तुर ५ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पु¥याइएको छ । नियमावलीअनुसार क्यासिनो सञ्चालनका लागि प्रत्येकले ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जोहो गर्नुपर्ने व्यवस्था हामीले गरेका थियौं ।
नयाँ प्रक्रियामा आउन पुराना वक्यौता नतिर्नेहरूको हकमा हामीले रोक लगाएका छौं । उक्त विषयलाई केन्द्रीय तहसिलको कार्यालय पठाएका छौं, जुन अर्धन्यायिक निकायसमेत भएकाले अब कार्यालयले उक्त रोयल्टी उठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्था हो । त्यसमा कार्यालयले बैंक खाता रोक्का, घरजग्गा लिलाम गर्ने, रोक्का गर्ने सबै काम अगाडि बढाइरहेको छ ।
पर्यटन पूर्वाधारमध्ये होटलमा लगानी पछिल्लो समय व्यापक आएको छ । तर, पर्यटक आगमन दर बढ्न सकेको छैन । लगानी डुब्न नदिनु सरकारको पनि कर्तव्य हो । यसका लागि के योजना अगाडि सारिएको छ ?
अवश्य पनि पर्यटनको महत्वपूर्ण पूर्वाधार भनेको होटल क्षेत्र हो । हामीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार हाल दर्जनभन्दा बढी पाँचतारे होटलमा लगानी भइरहेको छ । तर, यही पर्यटक आगमनले लगानी धानिँदैन भन्ने कुरा सबै निकायलाई जानकारीसमेत छ । यसमा प्रवद्र्धनको काम नेपाल पर्यटन बोर्डले गरिरहेको छ ।
केही समयअगाडि मात्र पनि हिमालयन मार्ट नेपालमा सम्पन्न भएको छ भने विदेशमा प्रवद्र्धन कार्यक्रम पनि बोर्डले गरिरहेको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले अहिले रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा लगिसकेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो पहुँच पु¥याउने अभियान पनि सुरु भएको छ भने सरकारले ठूला विमानस्थल निर्माणदेखि सडक निर्माणमा समेत अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ ।
हामीले पर्यटन क्षेत्रमा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने र पर्यटन क्षेत्रबाट आम्दानी र रोजगारी बढाउने विषयमा विभिन्न कार्ययोजना अगाडि बढाइरहेका छौं । सरकारले पर्यटक भिœयाउनका लागि नै भिजन, २०२० दसवर्षे पर्यटन रणनीति अगाडि सारेका छौं, जसमा १० वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पर्यटक भिœयाउने योजना अगाडि सारेका छौं ।
पर्यटन क्षेत्रको नियामक निकाय पनि भएकाले होटल, ट्राभललगायतका क्षेत्र गुणस्तरका हिसाबले कस्तो पाउनुभएको छ ?
हामीले होटल क्षेत्रमा नियमित अनुगमन गरिरहेका छौं । हालसम्म त्यस्तो कुनै पनि समस्या देखिएको छैन । अर्को टुर एन्ड ट्राभल र ट्रेकिङ क्षेत्रमा केही समस्या रहेका छन् । त्यहाँ पनि अनुगमन गर्ने, गलत गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गरिरहेका छौं ।
पर्यटनमा चुनौती र अवसर
सरकारले सन् २०११ लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरेपछि ५ लाख पर्यटक बढेर ८ लाखमा पुगे । सबैमा आकांक्षा बढ्यो । पर्यटनले राम्रो गर्ने रहेछ भन्ने भयो । पहिले बैंकहरू पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्दैनथे । त्यसपछि बैंकहरूले पर्यटनमा लगानी केन्द्रित गरे ।
पर्यटक संख्या बढेपछि लगानीकर्ताहरू बढेर गए । लगानीकर्ता पनि नयाँ किसिमले पर्यटन क्षेत्रमा भित्रिने अवसर पर्यटन वर्षले दिएको थियो । पहिले आफ्नै सम्पत्ति लगानी गर्ने परम्परा थियो । सन् २०११ पछि भने बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी गर्ने परम्पराको विकास भएको छ । नयाँ–नयाँ युवा समूह पर्यटनमा लगानी गर्न आएका छन् । अब चिन्ता लगानीकर्ताको मात्र होइन, बैंक, सरकार सबै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अहिले ठूला घरानाहरू पनि लगानीकर्ता भएर पर्यटनमा आएका छन् । बैंक डुब्दा सर्वसाधारणको पैसा पनि डुब्ने भएकाले यसमा सरकारदेखि आममानिसमा चिन्ता हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र पर्यटक आगमन बढ्नेछ । पर्यटक आगमन बढ्यो भने लगानीकर्ता पनि सुरक्षित हुनेछन्, जसबाट रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै राज्यको आम्दानी सबैमा एकसाथ प्रभाव पर्नेछ ।
तत्कालीन समयमै १० लाख पर्यटक लक्ष्य राखिएको थियो । ८ लाख आए, जुन एकदमै राम्रो हो । त्यो समयमा ८ लाखभन्दा बढी पर्यटक धान्न सक्ने अवस्थामा विमानस्थल थिएन । पहिले बनाउँदा पर्यटकका लागि मात्र लक्षित गरेर बनाइयो विमानस्थल, अहिले स्वदेशी यात्रुले विमानस्थल भरिने गरेको छ । भनेपछि अनुमान गरेभन्दा धेरै स्वदेशी बाहिरिने गरेका छन् ।
अब निजी क्षेत्र त तयार भए तर सरकारले विमानस्थल निर्माण गर्नुपरेको छ । त्यसका साथै हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउनुपर्नेछ । पहिले नेपाल वायुसेवा निगमले ६० प्रतिशत पर्यटक बोक्ने गरेको थियो ।
अहिले त्यो अवस्था छैन । अहिले रहेका २८ वटा एयरलाइन्स यात्रु घट्नेबित्तिकै बाहिरिने गरेका छन् । यसकारण सबै निकायले समन्वय गर्दै प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण एकैसाथ अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती छ ।
स्थानीय तह पर्यटन बजेट पर्यटन विभाग